Fikambanan-jiolahy – Fanaovana vola sandoka: Kaomisera iray voaheloka higadra asa an-terivozona 12 taona | NewsMada
Fikambanan-jiolahy – Fanaovana vola sandoka: Kaomisera iray voaheloka higadra asa an-terivozona 12 taona
Gadra an-terivozona 12 taona, miampy fandoavana lamandy mitentina 400 tapitrisa Ar mahery. Izany no sazy nanamelohan’ny Tendrom-pitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac), ny kaomisera iray sy ny tompona trano printy, voarohirohy ho nanao vola sandoka sy fikambanan-jiolahy
Mbola polisy indray koa. Nitohy, omaly, ny fiakaran’ny raharaha fanamboarana vola sandoka sy ny fananganana fikambanan-jiolahy. Afaka noho ny fisalasalana ireo enina hafa ahina ho mpiray tendro raha nidoboka am-ponja, migadra 12 taona, asan-terivozona ny kaomisera iray sy ny tompon’ny trano printy, nanontana ny vola sandoka mitentina 451 tapitrisa Ar mahery. Nodidin’ny Pac handoa onitra amin’ny fanjakana, eny anivon’ny Banky foiben’i Madagasikara handoa onitra mitovy amin’io vola sandoka nataon’izy ireo koa ireo olona roa ireo (451 tapitrisa Ar).
Polisivavy sy olona akaikin’ny depiote
Tsiahivina fa mbola raharaha fanaovana vola sandoka sy fikambanan-jiolahy koa no notsaraina, afakomaly, teo anivon’ny Pac. Anisan’ny tsy afa-bela tamin’izany ny polisy vavy iray sy ny mpanampy ny depiote “Assistant” parlemantera iray teo aloha, avy any Soavinandriana Itasy. Niharan’ny sazy koa ilay tompon’ny “cyber” nanamboarana izany vola sandoka izany. Maherin’ny 100 tapritrisa Ar eo ho eo ny volabe namboarin’izy ireo. Nodidin’ny Pac handoa izany vola be izany amin’ny fanjakana koa ireo voasazy ireo. Dimy hafa voarohirohy tamin’izany kosa nohafahan’ny Fitsarana.
Mpitantam-bola eo anivon’ny IDBM
Mbola hitohy, anio, indray ny raharaham-pitsarana etsy 67 ha ka raharaha maha voasaringotra tompon’andraikitra mpitantam-bola eo anivon’ny IDBM indray no anisan’ny hotsaraina amin’izany. Ahina ho voarohirohy amin’ny fanodinkodinam-baolam-panjakana kosa indray izy io.
Tsiahivina fa hifarana ny asabotsy izao, ity andiany fahatelo amin’ny fitsarana ireo fanodinkodinam-bolam-panjakana na kolikoly ity. Araka izany, andrasana ny momba ireo ambara fa trondro vaventy momba izany.